Umhlobo wakho omhle, oye wadlulisela umlilo kunye namanzi, lowo ogxinincile ngaphezu kwelanga elilodwa ulandelelana, utshata. Uyonwabile kwaye uyamthanda. Wena ungumhlobo osenyongweni kunye nomhlobo othanda kakhulu, othanda naye aze amthande ngenhliziyo yonke.
Ngokuqinisekileyo, ufuna isipho sakho sibe yinto engcono kakhulu.
Ewe, ixesha lifikile xa kukho ingcamango eyodwa kwintloko yam: "Yintoni endikumele ndiyinike umhlobo wam omhle kumtshato?".
Asiyi kuqwalasela okukhethwa kukho njengekhethi leenenjini okanye izitya ... okanye enye into edlalwa ngokukhululeka kwazo zonke iindwendwe emishadweni. Ufuna isipho sibe yinto encinci elwandle lolonwabo lomhlobo wakho omhle.
Wena, ke, unokunika imali. Zihlala zihlala zifuneka njalo, kunjalo. Kodwa, kholwa mna, ukuba awuyi kuba yedwa.
Kukho ukhetho olulodwa, okwenene, njengomhlobo wakho-umenze ube yingxenye yenkukhu! Iqela leqhenko yiholide yokugqibela yenkululeko, iyahlukana nayo. Makhe umhlobo wakho omhle akhumbule ngokuhlwa ngokubomi. Kwaye, yonke imihla ekhumbula umcimbi wakhe wokuzalwa, uya kukukhumbula, intombi yakhe ethandekayo neyintanda.
Kwiintsuku ezindala ezindala, ibhodi ye-bachelorette yayibanjwe ngosuku ngaphambi komtshato kwaye ibonakala njengale: amantombazana nomtshakazi baqokelelene, bebuhlungu kwaye bathetha, bekanye kunye nokudala izipho zomyeni wexesha elizayo lomtshakazi.
Kodwa, ngenhlanhla, ezi zihlandlo sele zidlulile, ngoku, i-party ye-bachelorette ibhiyozela ubomi ngenxa yomtshakazi kunye nabahlobo bakhe.
Usukile kwisigqibo malunga nento yokunika umhlobo wakho omhle umtshato. Uya kulungelelanisa lakhe iqela elikhulu le-bachelorette, elingaboni ukukhanya.
Faka ingcamango yakho, cinga ukuba kuya kuba mnandi ngakumbi kumhlobo wakho: unokuza kunye nemibhikano eyahlukeneyo, kufaka kwiprogram yokubonisa, unike izipho . Yonke into ofunayo. Kukhona kuphela umda - imali.
Kukho umgaqo omnye - akukho namadoda. Kodwa, ewe ke, okungafaniyo kunokwenziwa kubathandi bezemidlalo ezigqithiseleyo - ukumema intombi enhle kakhulu yamadoda amahle, abaphangi, kwiqela lokukhupha. Abadlwengula bahlaziye ngokugqithiseleyo i-raspberry yakho, bangenise emkhatsini we-atmospheric, ukunyaniseka kunye nomdla. Bonke abathathi-nxaxheba baqinisekisiwe.
Ukuba, kwizicwangciso zakho azibandakanyi abahluleli bememo, musa ukudabuka, ukhetho kunye neemeko zokubhiyozela ubuninzi bomtshakazi.
Umzekelo, kwazisa zonke iintombazana ukuba ikhowudi yokugqoka yintombazana isebenza kwintombazana. Umxholo weqela lakho unokuba nantoni na: amantombazana-abafundi esikolweni kwiipketi ezimfutshane negalufa, abafazi kwiingubo zokuhlwa okanye ebusuku. Yiya kwiklabhu okanye nakwezinye iziko, libale yonke into ehlabathini kwaye ujabule!
Kwakhona, kubantu abathulile, unokucinga ngezi zinto, ngokomzekelo, iplanga ekhaya kwiiparajamas. Hlanganisa kuphela abahlobo abasondeleyo bomtshakazi. Hlala egumbini ngeiglasi zeziphuzo ezimnandi. Ubusuku bobusuku nobusuku benzelwe wena kuphela: unokuthi uxoxe ngokukhawuleza, ukhumbule elidlulileyo; Unokujonga iifoto okanye iikhogali ezenziwe ngaphambili. Umoya kwiintlanganiso ezinjalo zihlukana nobudlelwane obusondeleyo kunye nokufudumala.
Ukuba uthe wagqiba ukunika umhlobo wakho omhle kumtshato wenkampani yenkukhu, ngoko usadingeka uthembele kwiinqwenela zakhe kunye namaphupha. Akuyi kuba kubi xa uqale uxoxe naye yonke imiba, kuba liholide lakhe.
Thumela izimemo kuphela kulabo bantu abaya kuba mnandi kumtshakazi kunye nomhlobo wakho omhle. Emva koko, ufuna ukudala umoya ococekileyo nobumnandi kumtshakazi. U-K-stati, izalamane malunga nenxalenye yomyeni, kungcono ukuba ungamemeli, ingakumbi ukuba kukho i-striptease yamadoda kwiprogram yakho yepok hen. Musa ukuphazamisa isimo sengqondo somyeni, othe wachaza ngoko nangoko kwinto eyenzekayo kwiqela lamantombazana.
I-Antipikap. Imithetho yokuzikhusela yamantombazana
Ixesha lokutya ixesha elide laseKorea
Banana cocktail nge mocha
Yintoni eya ku-2018 yo-Aries?
UZara watshata nomfokazi waseMoscow